नेपाली जनताको बुझाई र प्रधानमन्त्रीको काम गराई नेपाली जनताको बुझाई र प्रधानमन्त्रीको काम गराई – Akhabar Nepal
नेपाली जनताको बुझाई र...
नेपाली जनताको बुझाई र प्रधानमन्त्रीको काम गराई
२०७७, ६ असार शनिबार १०:३९
देश हावादारी गफमा चल्छ वा केही भिजन योजनाहरु निर्माण गर्नुपर्छ ? एउटा परिवार पाल्न त हजारौं सपना निर्माण गरेका छन् मेरा बुबाले । तर, देश चलाउने प्रधानमन्त्रीका योजना खाली पानीजहाज र रेल मात्र हुन । यि त वाल्यकालमा मेरा बालाई मैले सुनाउने सपना थिए । जुन आज क्रमशः क्रमश… चक्कानाचुर हुँदै छन् अनि म समाजको वास्तविकतामा प्रवेश गर्दै छु । हामीले लामो समयसम्म देशका लागि आफ्नो उर्जावान समय जेल-नेल भोगेका प्रधानमन्त्री पाएका छौं । तर, प्रधानमन्त्री पद पाउँदा पनि त्यही जेल जीवनको निरीहता र सपनाले मात्र देश चल्छ त ? प्रधानमन्त्री ज्यू । सपना देख्नु आफैमा नराम्रो अवश्य हैन होला तर तपाईका जनताका आवश्यक्ता र तपाईका सपनामा त केही तादम्यता हुन पर्ला नि ?
जनताको बुझाइ र प्रधानमन्त्रीको गराईमा किन आकास पातालको फरक देखिन्छ ? कुनै व्यक्तिलाई अनियमितताको आरोप लाग्छ भने उसको आरोप प्रमाणित नहुन्जेलसम्म उक्त व्यक्तिलाई त्यसमा निस्कृय बनाइन्छ जसले गर्दा अनुसन्धानमा उक्त व्यक्तिले पदिय शक्ति दुरुपयोग गर्न नसकोस ।
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस विश्वभर फैलिदै नेपाल प्रवेश गर्न करिव करिव ४ महिना लाग्यो । विश्व माझ त्राहीत्राही बनाएको प्रकोप नेपालमा समेत प्रवेश गर्न सक्छ भनेर कुनै पूर्व तयारी गर्नु पर्दैनर्थ्यो र ? सतर्क रहनु पर्दैन थ्यो र ? त्यति मात्र हैन कोरोना भित्रिएपछि पनि जनता बचाउन कता हो कता भष्ट्रचारमा निर्लिप्त हुनुपर्ने तपाईका कस्ता मन्त्री ? अनि तिनको तपाई प्रधानमन्त्री । प्रधानमन्त्री ज्यू, यति बेला जनता सोचिहरेका छन् सरकार जनतालाई लकडाउनमा राखेर आफु भष्ट्राचारमा लिप्त भएको रहेछ । नत्र भने किन युवाहरु लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै माइतिघर मण्डलमा आन्दोलन गर्थे ? के तिनिहरुको रहर हो ? पुलिसको डण्डा र पानीको फोहोरा खाने, त्यसमाथि तिनिहरुलाई कुनै डर छैन होला कोरोनाको ? तपाईले बालुबाटारबाट हेर्दा लाग्दो हो अनि तिनै मुठ्ठीभर भरौटेको कुरा सुन्दा लाग्दो हो तीनिहरु केवल दुई तिहाइको सरकारलाई चुनौति दिन र लकडाउनको खिल्ली उडाउनमात्र सडकमा उत्रेका हुन् । तर, ती युवाहरुलाई यतिवेला कोरोना भन्दा धेरै तपाईको सरकार भ्रष्टपथले त्राहीमाम बनाएको छ ।
म भष्ट्राचार गर्दिन र गर्नपनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीका अधिकांस मन्त्रीलाई भष्ट्राचार आरोप लागेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले भष्ट्राचारको परिभाषालाई नै पुन: ब्याख्या गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । आफुले नदेखि कुनैपनि भष्ट्रचार क्रियाकलाप पुष्टि नहोस् आफ्ना मन्त्री र आसेपासेको । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा जुन जुन व्यक्तिको संलग्नता देखियो ति व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने थिएन र ? नेपाली जनताको बुझाइ र प्रधानमन्त्रीको गराईमा किन आकास पातालको फरक देखिन्छ ? कुनै व्यक्तिलाई अनियमितताको आरोप लाग्छ भने उसको आरोप प्रमाणित नहुन्जेलसम्म उक्त व्यक्तिलाई त्यसमा निस्कृय बनाइन्छ जसले गर्दा अनुसन्धानमा उक्त व्यक्तिले पदिय शक्ति दुरुपयोग गर्न नसकोस । यदि यसो हो भने अहिले स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा दिएर बस्नु पर्ने बेला हैन र ? कि आफुखुशी मातहतका कर्मचारीलाई पटक पटक सरुवा गर्ने बेला हो ? त्यो पनि प्रकृया र तह नै मिचेर ।
करीव ३ महिना लामो लकडाउनका कारण नेपालको अर्थतन्त्र तहस-नहस बन्यो । सरकारलाई यो अर्थतन्त्र उकास्न चुनौतिका छाल छिमल्न सहज भने अवश्य छैन । तर अर्थतन्त्र बुझेका र प्रशासनमा दक्ष मानिएका अर्थमन्त्रीले कर अशुलीलाई नै अर्थतन्त्र उकास्ने निर्विकल्प माध्यम मान्दा भने यति वेला नीजि क्षेत्र मन्त्रीसँग रुष्ट देखिन्छन् ।
सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दाका ताका उद्योगी व्यवसायीले सरकारबाट राहतको अपेक्षा गरेका थिए । शून्य उत्पादन, आयात र निर्यात ढप्प जस्तै बनेर कर्मचारी र कामदार कसरी पाल्ने भनेर सोचिरहेको बेला उद्योगीहरुमा तव सन्नाटा छायो जव अर्थमन्त्रीले कर तिर्ने अन्तिक मितिको घोषणा गरिदिए । यति धेरै अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्रीको आफ्नै भिजन होला तर सामान्य व्यक्तिले हेर्दा यतिवेला त उद्योगी व्यवसायीलाई सरल कर्जा, व्याज मिनाहा, जस्ता प्याकेजको घोषणा सरकारले ल्याएर सहज अवस्थामा उनीहरुलाई कस्नु पर्ने हैन र ? सरकारले यति वेला गुण लगाएपछि त्यो गुणको हिसाव खोज्ने की पिडामाथि नुन चुक छर्कने हो ?
सरकारको सही भिजन नभएकै कारण नेपालमा लकडाउन थप कडा पार्नुपर्ने बेलामा खुकुलो बन्दै गएको छ । नेपालमा विदेशबाट नेपाल आएका नेपालीमा मात्र अधिकांस रुपमा कोरोना देखिएको छ । समाजमा कोरोना संक्रमण कम छ तर सरकारले लकडाउनका कारण कोरोना नियन्त्रण प्रभावकारी नदेख्नु भविष्यका लागि थप चुनौति बन्न सक्छ ।
हिजो नेपाललाई कुन-कुन देश जस्तो बनाउँछु भन्नेहरु यतिवेला सरकार र सरकारमा रहेका पार्टी नेतृत्वको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । तर शक्ति संघर्षको भुमरीले हिजो जनतासँग के बाचा गरेर चुनाव जितेका थिए र भोली कुन मुख लिएर तिनै जनतासँग जान्छु भन्ने हेक्का समेत राखेको देखिदैन उनीहरुमा । कोरोनाको कहर र संक्रमण बढ्ने त्रासले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिक ल्याउन समेत खुट्टा कमाउने सरकार भारतबाट ट्रकका ट्रक तरकारी आयात गरिरहेको छ । तर आफ्ना स्थानीय उत्पादन भने कोरोना सर्ने भन्दै माटोमा गाड्न लगाउँछ र विभागिय मन्त्री भन्छन् समाजिक सञ्जालमा लेखेजति सहज रहेनछ मन्त्रालय चलाउन । तपाईले हिजो मन्त्री नहुन्जेलसम्म प्रश्न गरेका प्रश्नको उत्तर आखिर के रहेछ कृषि मन्त्री ज्यू जथाभावी भारतबाट कृषि सामग्री आयात गर्नुपर्ने तर नेपाली उत्पादनलाई माटोमा गाड्नुपर्ने ? यसको पनि उत्तर त त्यही होला हैन मन्त्री ज्यू ‘जायते जायते तत्ववोध’ ।
यतिमात्र हैन सरकारका आफ्नै कतिपय निर्णयले गर्दा जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको छ । अन्य मुलुकमा रहेका नागरिक र भारतमा रहेका नागरिक स्वदेश फिर्ता गर्ने विषयमा जुन विभेद गर्यो सरकारले आम नेपाली जनतामा एउटा नमिठो स्मृतिका रुपमा सधै रहने छ । वर्गका आधारमा स्वयम राज्यले नै जनता विभेद गरेको सायद यो भन्दा डरलाग्दो उदाहरण अरु केही हुन सक्ला र ? क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि पिसिआर परिक्षण अपुग मात्र हैन विना परिक्षण, विना क्वारेन्टाइन घर पठाइदिँदा सरकारमाथि जनताले प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक थिए र त्यसमाथि क्वारेन्टाइनभित्र नै महिलाको सामुहिक बलात्कार, क्वारेन्टाइनमा रहेकी युवतीसँग सुरक्षाकर्मीको यौन लीलाले प्रशासनमाथि धब्बा मात्र हैन प्रशासनको अस्तित्वमाथि नै ठाडो प्रश्न उठाएको छ ।
जनताले भोक भोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा समेत सरकारबाट राहत नपाउनु । पैदलमा हजारौ किलोमिटरको यात्रा गरेर घर पुगेका श्रमिकले साँच्चै राज्य भएको महसुश गरे होलान त प्रधानमन्त्री ज्यू ? ३ तहको सरकार हुँदा पनि समन्वय अभाव भएका जनतालाई २० बर्ष पछि जनप्रतिनिधि पाएको खुशी कहाँ सार्थकता पार्यो ? जति वल गरेर स्थानिय तहले विपद व्यवस्थापन गरे त्यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले त्यतिकै सहयोग गरेको भए जनता लकडाउन उल्ङघन गर्दै हिड्ने थिएनन् होला । सरकारको सही भिजन नभएकै कारण नेपालमा लकडाउन थप कडा पार्नुपर्ने बेलामा खुकुलो बन्दै गएको छ । नेपालमा विदेशबाट नेपाल आएका नेपालीमा मात्र अधिकांस रुपमा कोरोना देखिएको छ । समाजमा कोरोना संक्रमण कम छ तर सरकारले लकडाउनका कारण कोरोना नियन्त्रण प्रभावकारी नदेख्नु भविष्यका लागि थप चुनौति बन्न सक्छ । सरकारले गरिव नीमुखालाई गाँस बास कपासको व्यवस्था मिलाओस्, उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग गरोस, नेपाल भित्रिएका सबैलाई सुरक्षित क्वारेन्टाइनको प्रवन्ध गरोस जनताको अभिलासा त्यो भन्दा फरक अरु केही छैन होला सायद ।
सुरुमा हल्ला फिजाउने पछि जनस्तरबाट विरोध सुरु भएपछि यस्तो भएको हैन, गरेको छैन मात्र हैन, सरकारकै मातहतमा रहेको कोरोना रोकथाम उच्च स्तरिय समितिको निर्णय केही घण्टा पनि टिक्न नसकेको तितो यथार्थले नेपाल सरकारको यातायात सम्वन्धी निर्णय र निकम्मपन पुष्टि भएको छ । एकातिर कोरोना संक्रमणबाट जनतालाई स-कुशल अवतरण गराउने दायित्व त छँदै छ, त्यसमाथि सुविधाजनक बहुमत सहितको सरकारले जनताका पक्षमा सधै काम गर्छ भन्ने अग्नीपरीक्षा समेत पास गर्नुपर्ने छ । नत्र सरकार आफैले सुरु गरेको वैकल्पिक शिक्षा जस्तो हली हराएको गोरु बन्दैन भन्न सकिन्न ।